Mihorohoro faobe | NewsMada
Par Taratra sur 13/01/2017
Efa tena ara-bakiteny mihitsy ity horohoro iainan’ny Malagasy manontolo ity. Tsy nisy nahery vaika ohatra iny horohorontany, omaly, iny raha ny tato anatin’ny 28 taona farany. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy sy ny tena fahasimban-javatra goavana. Mihorohoro efa hatry ny ela ny mponina an-tanàn-dehibe amin’ny fanafihana mitam-piadiana, toy ny any ambanivohitra ihany manoloana ny asan- dahalo. Mihorohoro koa etsy ankilany ireo tratry ny fitsaram-bahoaka. Mihorohoro isan’andro ny mpanjifan’ny Jirama amin’ity delestazy tsy misy fahataperany ity intsony. Mihorohoro fatratra ny tantsaha amin’ny hoavin’ny fambolena sy ny famatsiana ara-tsakafo ny Malagasy manontolo fa tsy mbola nisy haintany toy izao hatramin’ny namokarany. Iraisan’ireo roa ireo ny orana tsy mety milatsaka, ny loharano sy ny renirano ritra.
Tsy ny velona ihany fa mihorohoro koa ny maty amin’ity fandoroana tranomasina eny Ambohimalaza. Vako-pirenena toa fanapotehana ny kolontsaina, ny vakoka ary ny hasin’ny firenena mihitsy, raha tarafina amin’ny tany aloha, toy ny fandoroana ny teny Antongona, ny teny Ambohidratrimo, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo.
Sanatria tsy hitanisa loza sy fahavoazana amin’izao taona vaovao izao, izay vao avy nanaovana firariantsoa sy fanantenana samihafa, nefa toa ny mifanohitra amin’izany no iainana sy mitranga.
Samy hafa avokoa ny antony nahatonga ireo voatanisa ireo, toy ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny tontolo iainana, ny hasomparana tsotra na ara-panahy. Saingy itovizan’izy rehetra koa, olombelona ihany ny fototra niaviany sy nanao azy ary mifototra amintsika ihany ny vokany avy eo. Aoka anefa tsy hihorohoro amin’ity hoe zoma 13 anie androany e!